How kuunza mukomana murume chaiye: vanorumbidza, zvepfungwa inodzidzisa uye vanobudirira mazano
Home uye Family, Kudzidza
Nechekare panguva padariro pamuviri, achiziva kuti nokukurumidza chiedza achava mwanakomana akamirirwa kwenguva refu, mukadzi mumwe nomumwe anofunga pamusoro sei kurera mukomana murume chaiye. Zvinoita sokuti, hapana kuoma nezvazvo - maererano akasimbisa pfungwa, nokuti zvakakodzera kukura uye paumbwe ruzivo vanofanira kuva mukomana wacho yababa nzeve. Uye kwete chete pfungwa uye zvakananga kunobatanidza mubereki muupenyu hwomwana. Modern zvepfungwa akaita debunked ngano kuti chete mhuri yakakwana tingahukudza chipo uye hamburamakaka - anokwanisa kurera mukadzi mumba, uye amai chete.
Kana mwana, anofanira zvose rudo uye hanya namai. Pamberi zera chikonzero, maererano tsvakurudzo, mwana asingadi kusiyanisa vanhu tichishandisa munhurume, asi nokuda gore upenyu rokutanga, iye nyore anoratidza apo amai, baba, hanzvadzi, babamunini, kana dzimwe hama, vafambidzani. Kubvira pakaberekwa mukomana aida zvikuru ushamwari uye rudo pane musikana achangoberekwa, sevamiririri duku yakasimba hafu yevanhu vari nyore nomuviri mupfungwa. Hazvina zvakafanira tikadzivisa kutaurirana pamwe mwana - kunyange pane kudaro muduku, mwana anonzwa mafungiro. Cradling mumaoko vachichema mwanakomana vanofanira kutaura naye, achiyeuchidza kuti murume, iye simba uye vakashinga.
Paaiva nemakore matatu, kushamwaridzana varume kuva faniro naye, uye zvisinei ndiani: baba, murume, musikana kana sekuru. Nokuti iye, chinhu chikuru muchizvarwa ichi - kunzwisisa uye kudzidza zvose hono maitiro unhu uye tsika. Kutaura zvazviri, kurera mukomana chaiye murume zvepfungwa Panguva iyi waro pakukura rinokurudzira haana kumanikidza mwana kuita chinhu nevabereki vavo, pamusoro kuda kwake. Uyu aiitwa kusanzwisisa mumhuri, uyewo nokuratidzwa pachavo zvivako mwana muupenyu.
Kubva mukomana - munhu
A Mwana anokura, uye akatora sezvikonzero unhu avo vakamupoteredza kubva pauduku, zvepabonde simba, unovaka kukurukura nevezera uye nehama. Treatment vakadzi, mukomana aumba naamai vake - iye ndiye ndiye romukadzi, runako uye musha nekupisa. Ndichitarisa amai, mwana zvakakwana anoyeuka zvinhu vake, zvose zvokunze uye hunhu, izvo mune ramangwana achapiwa nezvekuipa ake zvaunofarira pakusarudza upenyu naye.
Ko mai oga kurera mwanakomana wake
Vakadzi vazhinji, vachiedza kupa mwana wako rudo uye kutarisirwa baba vake, kazhinji chibayiro pachavo. Uyezve, mumwe nomumwe wavo anowana kururamiswa nezvaanenge, "Zvakanaka, chii kana murume anorova ini / kwete kushanda / drinks / kuchinja, asi mukomana ane baba kukura munhu pake, anofanira kuchengeta kwababa.". Kazhinji "hanya" akadaro kunoratidzwa muchimiro kugara kunongedza uye zvinobatsira, sezvo kuratidzwa kusaremekedza mukadzi Hatingatarisiri kubva murume akasimba yemadzibaba manzwiro. Varume mhando iyi nenzira ipi zvayo, asi, Chokwadi, zvikuru pamuviri, handidi kubatanidzwa zvokurera mwana, zvose kufunganya pamusoro pake achava zvakakwana nhema pamafudzi vakadzi.
Pakupedzisira, pashure refu uye anorwadza kuedza kugadzirisa "vakaregeredza baba" uye maturo kunotsvaka kubvuma mhuri hwatsvuka. It achisunda mukadzi ane mwanakomana muduku kutsvaka baba itsva nembudzana. Dzimwe nguva anodzokorora zvose mudenderedzwa, uye mune zvimwe zviitiko mishomanana kuva mhuri murume akanaka uye baba. Musafunga kuti wakati vakagovana nomurume wake, amai vasina murume haasi kukwanisa zvakanaka kudzidzisa mumwe mukomana - iri pasi simba chero zvakakwana uye norudo naamai. Kuti aite izvi, unofanira kutevera zvishomanana mitemo yokukurukurirana nemwana.
How kuunza mukomana murume chaiye asina baba
Sezvo tichiziva munyika mai vanofanira kuva nomwanakomana basa pachavo, nezvavanoita uye mashoko. Nokufamba kwenguva, mukomana anotanga kunzwisisa kuti zvinokosha kuzadzisa chivimbiso, uye nokukanganisa zvikagadziriswa. vanofanira kutsanangurira mwana chete remhepo, inzwi nyoro pasina zvinonyadzisa uye kuita hasha. Zvakakosha kuyeuka kuti mwana anofanira kuramba kupa chisarudzo chakarurama - nzira chete uchanzwira yakazvimirira.
Kutaura zvazviri, kurera mukomana murume chaiye, pane chimwe chinokosha: Mwanakomana anofanira kunzwa kukosha kwayo. Asi hapana kwokukudziridza umbimbindoga nayo - munhu akadaro kuchawedzera "Narcissus", uye mimwe yacho kwadzakabva muupenyu akura kuchava kwakaoma zvikuru. Kukosha haana akaisa zvose pakafunuka (Ndiri zvose nokuda ino), asi chete chokuita mai. Somuenzaniso, amai vanogona kukumbira mwanakomana wake kuti amubatsire, kana apo kufamba kero naye namashoko kana kudyara munzvimbo mabhazi, "Tora ruoko rwangu, ini nokukurumidza, uye imi munofanira kuchengeta ini."
mai ose vanofanira kunzwisisa kuti kukurukura varume vanhu mwana kuva anobudirira uye chivimbo murume, zvinokosha. Zvinonzi vanosungirwa kubvumira mwanakomana wake kuona baba vake (kana), vanopedza nguva naye. Muchiitiko chino, zvinofanira kuramba kuziva zvose zviitiko muupenyu hwake, kuti kutaura naye nezvazvo uye kubatsira kugadzirisa matambudziko. Kurera mwanakomana, murume chaiye? Iva shamwari yakanakisisa uye pedyo naye. Nokusava munhurume kutarisirwa mukomana Chokwadi, pashure kubvunzana navo, rinyorwe chero zvemitambo Chikamu - mitambo anoranga, zvinobatsira mwana kujairana vanhu.
Education munhu uyu: Common Zvikanganiso
An overabundance rudo vanoziva zera chinokurwadzai isiri maonero ari munyika mwana. Pasina mubvunzo, rudo uye kudzivirira mwana wavo anogona uye anofanira kuva, asi zvose zvinofanira kuva nechiyero. Vanaamai akakumbira nomutsa kuchinja roga panguva apo mwanakomana wake vachakura uye kuwana mhuri. Vamwe vakadzi vari kunyanya zvakaipisisa kuona kutarisira mwana kubva vabereki musha, havana havangagoni kugamuchira chokwadi kuti ikozvino mwanakomana wavo anodiwa kwakakwana pasina mai.
Abuse, kumanikidzwa vabereki haana akabatsira vachengetedze simba uye ushingi murume. Kubva mhuri vanodavira kuti kushevedzera uye kurohwa, uyewo kusavapo kusarudza mutemo - ndiwo chaiwo, enda mamakisi, vainyara uye akatsamwira panguva vakomana vane mikwende pamusoro kusanyatsozviremekedza uye vasingaremekedzi vakadzi. Zvinokosha kuyeuka kuti vana vedu - kupangidza "Weather mumba" uye unhu vabereki.
Kusadiwa zvose amai nababa ramangwana anoita munhu kutendeuka nechomukati. Pataikura, vakomana ava vave vaeni, vazhinji vavo kuti kumanikidza vabereki kuti kuchengeta pachako, kutaura nemakambani dzakaipa vanotanga kushandisa doro, mishonga, wana muropa siyana.
Future murume: dzidzo mumhuri rakazara
Vamwe vanaamai akatendera imwe chikanganiso chikuru chaizvo - kunetseka utano uye kuchengeteka achangoberekwa, havafaniri kupa baba vangu zvakazara kunakidzwa kushamwaridzana nadzo. Inguva wokutanga musangano napapa uye mwanakomana wake ndiye musimboti kurera mukomana murume chaiye. Kana mukadzi akaramba murume wake kakawanda ake chido kubatsira mwana, remangwana hwakanaka nhaurirano pakati pababa nemwanakomana angauya maturo.
Amai tisiye mwana nomurume kazhinji, mipiro nguva yavo pamwe - kupa varume vedu vane yenzendo zvakasiyana, ruramisa navo parwendo hove. Chero kunetsana ezvinhu mai vanofanira kuramba vasina kwavakarerekera, asi musakanganwa kuti kutaura mbudzana pamusoro kucharohwa ake.
Sababa rokumutsa mukomana murume chaiye? Anofanira kuva muenzaniso payo zvose, kutanga ukama wake, uye anopera nzvimbo yavo munzanga. Mwana anonzwa intuitively kana Dad anoda Amai, kana achiremekedza naye. Kunyange kana vabereki vose nomwanakomana kuedza kuumba mufananidzo mhuri akakwana, asi vakavharirana masuo zvachose chinyararire tsvaka ukama - kubudisa mukomana uyu, nhengo pfungwa utano vanobatsirikana zvakaoma.
Books - akanakisisa vabatsiri vari rokudzidzisa muitiro
Vabereki vakawanda vari kutsvaka mhinduro yomubvunzo wokuti sei kurera mukomana murume chaiye. Book rine zvakanaka okuberekwa rengano, kubatsira kutaurira zvizere nezvebasa mwana vakagaramo muupenyu. Knights, varwi, machinda, tinazvo simba guru, nguva dzose vakagadzirira kubatsira kurukutika pabonde - nerunako, enchanted nevangwaru zvakaipa.
Kuparadzira kuedzesera neimwe rungano achibvumira zvinowanika kutsanangura kakomana munhu - simba, umhare nekuzvipira vanhu. Nokuda Ngano ari subconscious mwana akaumba chifananidzo yakanaka iye anoda kuedza.
Kurera mwanakomana, murume chaiye: vanachiremba Tips nokuti Moms
Dzidzisai mwana wenyu nemitemo nokuzvibata. Pasinei nezera kutanga, chinhu chikuru kuti aiziva kubva vaduku, sei kutaura mukuru sei vakadzi vanoda rubatsiro, uye sei kukosha mashoko akataurwa kwavari.
Tsanangura kuti mwanakomana wake kuti manzwiro ake ose: kutya, kuvhiringidzika, mufaro, kusuruvara uye kushungurudzika kunogona uye kunofanira kuiswa mashoko.
Kurudzira mwana wako kuti arayire, kumubvumira kuti abatsire pamba.
Kuronga manheru kuverenga, verenga mwanakomana wake dzoupenyu hwakanaka uye rengano, mugove naye dzavo nazvo.
Dzidzisai mwana wenyu kuti vatambe. Kuramba kukundikana kwayo, mukomana anoti rimwe kukundwa - haisi chikonzero mapfumo uye kusiya chinangwa.
Kumuratidza kuti rudo hakusi kushaya.
Bvumira mwana wako kuti akubatsire uye vanhu vakavapoteredza. Zvinonzi ngakurege, uye kwete kumanikidza.
Kurudzira kakawanda kutaurirana napapa uye mwanakomana wake.
Recommendations nokuti madzibaba
Munyika pamuviri, kuchengeta mudzimai, taura achikura pasi mwoyo wake mwana. Aberekwa, edza nguva yakawanda sezvingabvira naye. Panguva ino, uchatanga kunzwisisa sei kurera mukomana uyu murume kushandisa chete unyanzvi ake uye kuda mwana.
Find vakasununguka nguva, edza napo pamba - kusingaperi kufamba uye refu nokushanda zuva hunobviswa mwana wako anokosha pauduku yakapedzwa baba vangu.
Kazhinji kuratidza manzwiro. Rudo, kuseka uye nemisodzi chokuita mwanakomana wako, hakunganzi kuva utera. Ndichitarisa iwe, mukomana anoziva kuti hapana kuva nacho.
Kurangwa, akasiyira zuva nezuva kuti mwana wako. Kurera mwanakomana, saka akakura murume anobudirira? Ita izvozvo zuva anobatsira, kuti amubatsire kugadzirisa dambudziko. Zvinyoronyoro, pasina kurova, kuisa mitemo chirango ichi zvakadzikama uye zvakasimba pakuti kuremekedza pachake uye mai vake.
Kukwanisa unakirwe nemwanakomana wako. Joint yokufaranuka kunofanira kuunza mufaro vose vana uye imi.
Zvokuita kana wakangosuruvara kumba: vamwe anobatsira mazano.
Uchashamisika kana ukaona kuti basa hwomwana upenyu kutamba vanasekuru
Aesthetic dzidzo - ndiye paumbwe romubati manakiro munhu
Mazita And History Ravo
Games kuti azobatsira pfungwa Child
Vana vangu. Kurera mwana akakwana?
Delicious pasi-mafuta zvokudya chikanywa: Quick
Cerumen impaction: zvinokonzera, zviratidzo uye kurapwa
Inonyatsobudirira madonhwe kuti nekatsi nokupisa: wongororo
Mixed unhu chirwere: zviratidzo, marudzi uye kurapwa
Power mafufu: mitemo okusuma nopindirana zvokudya
Wedzerai injini torque pamusoro yayo
The London Metal Exchange. History chitarisiko uye mashandiro
"Chevrolet niva" pamwe injini yacho "Priory": tsananguro, unhu, zvakanakira wongororo
Vateereri "Morozko". Izvozvo zvinopedzisira zvaitika
Geographic Fani - nayo ... Geographical mananara zvakasikwa: mienzaniso
Zvinofanira pakuverenga pensions
Mabasa vatambi: "nguva loop"